QANDARAASLEEY IYO QARANKII SOMALIYEED:-Saacid Shirdoon oo furay Qandaraas Wariyaasha lagu dili karo W/Q Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. | News From Somalia
QANDARAASLEEY IYO QARANKII SOMALIYEED:-Saacid Shirdoon oo furay Qandaraas Wariyaasha lagu dili karo W/Q Cabdullaahi Yaasiin Jaamac.
Posted on February 19, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Midka mid ah arrimaha ay wariyaashu Muqdisho jeclaa lahaayeen in ay Xal u helaan waa dilalka iyaga ka dhanka ah.
waxaa jira Walaac ay qabaan Amaankooda waxayna xasuusan yihiin qaar iyaga ka tirsanaa oo Saandihii la soo dhaafay la qaarijiyay kuwaasoo dhinacyo kala duwan lagu eedeeyay.
16 02 2013 ee Taariikhda Milaadiga Muqdisho waxaa ka dhacay Kulan ay wada qaateen Ra’’iisalwaasre Cabdi faarax Shirdoon (Saacid) iyo Xubno wariyaasha ka wakiil ahaa, waxaana la isla soo qaaday arimo ay ku jireen in Warbaahinta iyo Dowladdu wada shaqeeyaan iyo sidii looga hor tegi lahaa Dilalka Shaqaalaha warfaafintu la kulmaan.
Cabdi Faarax ShirDoon (Saacid) iyo Wasiirkiisa Warfaafinta Cabdulaahi Ciil Mooge Xersi waxa Wakiilada Saxafiyiinta u sheegeen in dhaqaale badan la siinayo Cidii soo sheegta Qofkii Wariya Dila.
Ra’iisalwasaare Saacid waxa uu yiri “Cidii soo sheegta Qof Wariye Dilay waxaan siinaynaa Konton kun oo Doolar”.
Kelmadaas ka qeybgalayaasha Saxaafaddu waxa ay u muuqdeen in ay ku qanceen maxaa yeelay ma jirin dood ay ka kaneen laakiin waxaa ii muuqda Qatar weyn oo halkaas ka soo wajahan.
Muqdisho waa Meel aanay ka jirin Sharci iyo kala dambeyn, in la soo sheego ama la arko dad la dilayna waxa ay ka mid yihiin wax Waxyaabaha waagii soo beryaba la fisho.
waxaa jira Shirqoolo qaarijin ah oo qarsoodi oo hab maldahan loo fuliyo dabadeedna Cidda ka dambeysa in la fahmaa adkaa karto ama ay waqti qaado karto .
waxaa kaloo jira Dilal ay ku kacaan Askarta Dowladda Federaalka ah oo si bareer ah dadka u laaya mana jirto cid ka daba hadasha.
si aan gambasho iyo dhuumaaleysi ahayn Askar dad u dilay ayaa Magaalada iska Mushaaxaya oo aanay Cidi la hadleyn, taasna waxaa laga dhadhanso karaa in aanay qolyaha Kuraasta ku fadhiya ee Saacid ka mid yahay dadku agtooda qeymo ka lahayn, wararka ah in Muwaadiinta danahooda ay ka shaqeynayaanna ay yihiin hudhuu hadhaa iyo waxba kama jiraan.
Kulankii R/wasaaraha iyo Saxaafadda Ku dhaxmaray Magaalada Muqdisho
Warka ra’iisalwasaare Saacid waxa uu abuurayaa hami dhaqaale, sidaa aawgeed waxaa laga yaabaa in shaqsiyaad ama kooxo ku fikiraan sidii ay qarashkaas fara badan ku hano lahaayeen.
dabadeed wax ay abaabuli karaan Shirqool ka dhan ah hal Warfaafiye ama in ka badan si uu Jeeb kooda u galo Doolarka la balanqaaday.
1991 ilaa 2006-dii Dagaaladii qabiilka ee ka dhacayay Muqdisho ka sokow waxaa ka jiray dilal ay ka dambeeyeen, Siyaasiyiin, Dad hay’ado Shisheeye u shaqeeya iyo kuwa kale oo ay Fuli jireen shaqsiyaad lacag ku qaada jiray in ay qof ama koox soo qaarijiyaan.
Barnaamijkaas qolayaha fuliyaa weli Caasimadda waa ay ku badan yihiin, sidoo kalena waxaa joogta Caasimadda askarta iminkaba sida lacag la’aanta ah Duhurki dadka ku dila.
marka waxaa dhici karta iyadoo hababkaas la isticmaalayo in ugaarsiga Wariyaashu sii kordho.
Qaabka la sameyn karo.
kooxda wax dili rabtaa waxa ay la soo heshii karaan Howl fuliye waxa ayna siinayaan ama u balanqaadayaan wax xoogaa qarash ah sidii muddo dheer la arki jiray oo kale.
marka uu ficilka ku dhaqaaqo isla iyagii iyo kuwa kale oo wada shaqeyni kala dhaxeyso ayaa soo qaba kara ama soo sheegi kara dilaaga.
waxa ugu badan ee Dilaagu ku doodi karaa waxa ay noqo karaan in qolada soo qabatayi howsha ku lug lahayd taasina uma socaneyso, maxaa yeelay laga yaabee in soo qabtaha howsha abaabulay ka tirsan yahay Laamaha Dowladda Federaalka ah oo aan Cadaalad looga baran.
“qolo ayaa dilka fulineysa kadibna waxa ay isu qeybinayaan dhowr qeybood, kuwo kiiska ayay Nin aan waxba geysan ku oogayaan kuwo kalena waa ku Marqaati furayaan, taas ayaa la samey karaa si dhaqaalaha Ra’iisalwasaaruhu balanqaaday loo hanto” ayuu yiri midka mida h wariyaasha Muqdisho ka howl gala oo Sababo Amaan aawgii magaciisa u qariyay.
wuxuu sheegay in Kontonka kun ee Doolar noqo karto mid loo tartamo iyadoo dhabbaha loo marayaa yahay qaarijinta wariye howlihiisa shaqo gudanahaya oo war moog ah.
“waxay nagu soo jeedinayaan indho aan markii hore na arkeyn, arinta wax ay gaarsiiyeen Meel aan wanaagsanyan ayuu hadalkiisa ku daray”.
Xukuumaddda miyaa wariyaal dili rabta?
waxaa jira shaki wariyaasha qaar ka qabaan in Xukuumadda Federaalka ahi rabto in si qarsoodi ah u qaarijiso warkaan lagu muujinayo in Wariyaashu agteeda qaali ka yihiin ee ay iminka wadaana uu yahay mid lagu sii gaashaamanayo.
waxa aad u badan Teleefanada Ciidamada Sirdoonka iyo saraakiisha kale ee Dowladda xubno ka mid ahu diraan Saxafiyiinta iyagoo handada marka la baahiyo warar ay u arkaan in ay lidku yihiin.
Wariye C/caziiz Koronto oo Dowladda u xiran
“Maal mahaan wariye lama dilin, arintana waa Toosh la ifinayo oo ah in Wariyaal la dilo, Wariye Cabdi-caziiz Koronto Dowladda ayaa Xabsi hal sano ah oo gardarro ah ku Xukuntay, sababtu waxa ay tahay wareysi uu ka qaaday Haweeney baliisku kufsaday oo xattaa aan la baahin, Dowladdu waxa ay rabtaa wariyihii la shaqey waaya ama wax aanay rabin sheega in ay shirqool ku disho si aan ficilkaas gurracan ee ay damacsan tahay loo fahmin ayay beer jileec Been ah wariyaasha u sii Muujineysaa” ayuu yiri Wariye Idaacad Muqdisho ku taal ka tebiya Barnaamij Siyaasadda Dalka iyo dhacdooyinka lagu faaqido.
Intii aan warfidiyeenadaan la sheekeysanayay waxay iga codsadeen in aanan magacyadooda soo daabicin, markii aan weydiiyay hadii ay ka baqayaan in la xiro, waxay igu yirhaadeen “taa kama baqeyno ee’ in nala dilo umbaan ka baqeynaa”.
Qatarta kale ee ka imaan karta balan qaadka ra’iisalwasaaraha waxa ay tahay in Wariyaasha dhan loo qaato in ay ka tirsan yihiin Dowladda Federaalka ah oo la og yahay in Colaadu kala dhaxeyso Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab iyadoo sidoo kalena ay jiraan xubno Siyaasiyiin ah oo quud dareynaya in ay Madax noqdaan Magaaladana ay dhici karto in ay howlo qorsheysan ka fuliyaan.
ma jirin kala saarid ee waxa uu Saacid sheegay in wariye kasta oo la dilaa Ciddii soo sheegta Lacagtaas kontonka kun oo doolar ah la siinayo.
taas ayaa waxa ay abuuri kartaa shaki ah in dadka warfidiyeenada ah ee Muqdisho ku nooli yihiin Saraakiil aad Muhiim u ah kana sareeya intii markii hore loo maleynayay.
arintaan waxaa loo baahan yahay in Wariyaasha aan Wasaaradda Warfaafinta xubna tooska ah ka ahaynu fiiro dheer u yeeshaan.
“dhaqaalaha ra’iisalwasaaruhu balan qaaday waxa uu keeni karaa in uu sii kordho Bar tilmaameedsiga Wariyaasha ka dhan ah maxaa yeelay waxaa naloo arki kara Shaqaale Dowladda ka tirsan ama in aanu taageer siino, anagu waa ka Madax Banaanahay Dowladda, arintaana dhibaato ayay horseedi kartaa ” sidaas waxaa yiri ka mid ah wariyaasha wax ku qoraha Baraha enternet indheerna Xirfadda Saxaafadda ku jiray kana howl gelayay Muqdisho.
Runta ma tahay in lacagta la sheegay la bixinayo mise faruuryaha war ku eg weeye.
iyadoo uu Socdo Kulanka Saxafiyiinta Ra’iisalwasaaruhu la lahaa ayaa Wasiirka Warfaafinta Cabdulaahi Ciil Mooge sheegay in labaatan iyo shan kun oo doolar la siinayo Ciddii soo sheegta Qofki wariye dila.
Warkiisa waxaa mid ka duwan sheegay Ra’iisalwasaare Cabdi Faarax Shirdoon oo Carrabka ku adkeeyay in ay Konton kun oo Doolar dhiibayaan.
waxaa jira Dilal ka dhan ah Dowladda oo Idil waxaana la qaarijiyay wasiiro, Xildhibaano iyo Saraakiil Ciidan oo sare, tiradooduna badan tahay.
waxaa kale oo la dilay Xisaabna aan dhaqso lagu soo koobi Karin, askar iyo gudoomiyaal, ku Xigeenadoodii, xubno xaafado ka Madax ahaa iyo kuwo kale, waxaana dilalkoodu soo socdeen 2007 bilowgeedii ilaa xiligaan oo aanu joogno 2013 horaanteeda.
dadki dilalkaas geystay waxa ay wariyaashu sheegayaan in aanay ogeyn cid ka mid ah oo la soo qabtay intii Gacan ku soo dhigideeda ku lug lahaydna Abaal marin Dhaqaale la siiyay.
marka aanu isweydiinee ma dhici kartaa in Wiil ka shaqeeya Idaacad gaar loo leeyahay oo laga yaabo in ay xattaa ku adagtahay wariyaasheedu in ay Madaxda Dowladda Federaalka ah la kulmaan dil loo geystay si xog ku saabsan loo helo in qarash lagu bixinayo?.
Ra’iisalwasaaraha iyo Wasiirku hadaybayba qarash bixinayaan oo lacalla ay dhab ka tahay, Jeebkooda kama dhiibayaan ee waa in laga soo qaadaa Bangiga Dowladda, marka laamaha kale ee Dowladda ee aan ogolaashaha lacag ka qaadashada Bangiga looga maarmin, oo ay ku jiri karaan Madaxweynaha, Gudoomiyaha Banigiga, Wasiirka Maaliyadda Arintaan wax ka og yihiin mise sheekadu waa labadaan Nin mid ku kooban?.
waxaanu la socanaa Madaxda iminka Muqdisho joogta iyo kuwii ka horeeyayba in ay dhaqaalaha Dekedda iyo Garoonka Diyaaradaha ka soo gala oo ciidamada Shisheeye ee Uganda iyo Burundi ee iyaga ilaaliyaa qeyb ku leeyihiin mooyee Isha kale ee ugu weyn ee dhaqaale ka soo gala tahay lacago aan joogto ahayn oo waxa Beesha Caalamka loogu yeero bixiyaan, marka Maamul isagu tuugsi iyo taakuleyn Shisheeye ku taagan oo Wasiirkii Dibadda aadaba ciddii uu u tago wax bartood la dhowrayo, ma awoodaan in ay Konton kun oo doolar shaqsi la dilay Ninkii soo sheega qofka ka dambeeyay siinayaan?.
nimanka iyo haweenka imanka Madaxda ka ah Dowladdaan Shisheeyuhu yagleeyay ee Soomaaliya ka jirta waxa ay jagooyinkaas u qabteen oo ay dadkoodii ugu falaagoobeen Shisheeyana u hoos galeen Cadawga Diinta Islaamka ku soo duulayna u raaceen Sandareerto ama dhaqaale yar marka si loo ilaaliyo Muwaadiniinta Soomaaliyeed Dhiigooda miyay lacag ku dhiibayaan? Maxaa yeelay iyagaaba Muwaadiniinta u keenay Cadawga kumanaanka ka dilay, dhulkoodina haysta iaygana gumeysta.
kala hadlidda Xukuumadda
Warka ah lacag ayaanu siineynaa Ciddii wariye qofkii dila soo sheega waxaa jira arimo Muujinaya in aanuu ahayn mid laga sii Fikiray laakiin Gogosha markaas la fadhiyay korkeeda lagu curiyay.
sidaas waxaan u leeyahay kala hadlidda labada Nin ee wariyaasha la kulmay maxaa yeelay hadduu ahaa lahaa mid horay looga soo showray ama looga soo tashaday, hal war ayay ku hadli lahaayeen.
Wasiirkii ayaa kacay oo Cadadka Lacagta labaatan iyo shan kun oo Doolar ku sheegay.
Ra’iisalwasaaraha ayaa ka daba istaagay oo sheegay in ay Konton kun tahay.
Warkoodi waa la daba taagan yahay
Wax ka yar labaatan iyo Afar Saac markii ay ka soo wareegatay hadalkooda, waxaa hadlay ku XigeenakaWasiirka Warfaafinta Cabdi-shakuur Cali Mire waxaanuu sheegay in uu saxayo qalad ka dhacay Ra’iisalwasaaraha iyo Wasiirka Warfaafinta.
Waxa uu sheegay in Cidda Balanqaadka loo sameynayo ee qarashka loo ogol yahay tahay qoladii xog ka keenta wariyaashii horay loo dilay Cidda ka dambeysay.
Wararkaan ayaa ah kuwo dhamaantood is buruniya oo aan Meel u wada socon taasuna waxa ay noo cadeynaysaa in uu yahay qorshe aan Afka dhaafsiisneyn.
Cadaalad darada wariyaashu tirsanayaan.
18 December 2011 Muqdisho waxaa lagu dilay Cabdi Salaan Sheekh Xasan (Xiis) oo u shaqeynayay Telefeshinka Horn Cable ee xaruntiisa weyni tahay Hargeysa.
Nin ka tirsan Askarta Dowladda ayaa si bareer ah u toogtay .
Waxaa la dilay saacado kadib Markii Nin ka tirsan Madaxda Ilaalada Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Maxamuud Axmed-nuur (Tarsan) u hanjabay uguna goodiyay in uu dilayo.
Wariyaasha Muqdisho waxa ay bilaabeen Mudaaharaadyo iyo Cabashooyin joogto ah iyagoo dalbanaya in Gacan ku dhiiglihii iyo ciddii soo dirtayba Maxkamad la soo taago, kadibna Xukun Sharci ah lagu fuliyo.
Inkastoo Maalmo uu xirnaa Ninkii Cabdi-Salaan u goodiyay oo la aaminsan yahay in uu soo diray Dilaaga, hadana waa la sii daayay.
Waxaa difaacay oo Xabsiga kasii daayay Maxamuud Axmed-nuur (Tarsan).
tarsan ayaa sabata uu Ninkaan ugu dooday una Fasax loo arkay in uu asigu ahaa Maskaxda sare ee qorshaha abaabushay.
Arinta ayaa ku biyo shubatay in la joogiyo isu soo baxyada iyo soo saaridda Warsaxaafadeedyada dhacdadaas la xariira maadaama wariye kasta oo af adeyg iyo Il adeyg Muujiyay si gooni ah loogu goodiyay.
waxaa u cadaatay in aanay waxba ka duwaneyn kan la dilay Meeshana aanay wax Caddaalad la yiraahdo ka jirin oo sidii Mooryaantii shagaashamaadkii oo kale Maamulku u dhaqmayo.
Eedeysanaha Wariyaashu Maalin walba waa arkaan waxaanay Xasuustaan Cabdi-Salaan Xiis oo intaan ka aqiin ahaa Shaqsi dabeecad wanaagsan Bashaashna ahaa laguna aqoon cuqdad iyo dhib badan toona.
Wariyaashu hadday awoodaan daqiiqadna lalama sugeen Maxkamdeynta Ninka in uu Cabdi-salaan dilkiisa ku lug lahaa lagu tuhmayo kii rasaasta ku tirshayna waxaa la sheegay in Dibadda loo diray.
Haddii Ra’iisalwasaare Saacid ka naxayo dililka wariyaasha muxuu u soo xiri waayay eedeysanaha kadibna Maxkamad in la soo taago u dalbo waay? Waa Su’aasha Maskaxda wariyaasha ku weyn.
Waxaa xusid mudan in Cabdi-Caziiz Koronto oo wariyaasha Muqdisho ka mid ahaa dhawaan Xabsi la dhigay iyadoo lagu haysto Haweeney uu wareysi ka qaaday ka gadaal markii Baliiska xubno ka tirsan Kufsadeen.
Marka aaway Xoriyatul Qowlkii iyo Madax banaanidii Dowladdaan iyo tii ka horeysay buugaagta ku xariiqeen?
Ra’iisalwasaaruhu Muu soo daayo wariyaha Gardarada ku xiran? Waxa ay ka mid tahay Su’aalaha wariyaashu qabaan.
Nabi Muxamed Naxariis iyo Nabad gelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri “qofkii rumeysan Ilaahay iyo Maalinta Aaakhiro ha ku hadlo kheyr haddii kale ha iska aamuso”.
Anagoo taas raaceyna waxa aan ku hadleyno aanu ka fiirsano, aanna ka digtoonaano Cadawgeena oo Gaalada iyo Gaala raacyadu ka mid yihiin.
aanu beri ka noqono oo ka fogaano intii Ilaahay iyo Rasuulkiisa (NNKH) iyo intiii raacsan Cadaw ku ah .
Amaankiinna ka taxadera oo ha Magangelina Cadawgiina iyo Cadawga ilaahay sida in Qaramada Midoobay Ururada Saxaafadda Gaalada iyo wixii la mid ah ha weydiisanina in ay Amaankiina Damaanad qaadaan.
Iyagaan Amaan haysan oo la dilaa laan afduubtaa had iyo goor.
Ilaahay Magan gala Dalkeena iyo dadkeena iyo Diinteena Islaamkana aan u shaqeyno intii naga mid hayd ee wax ka qaldameena Alle ha u soo laabato.
Wariye Cabdulaahi Yaasiin Jaamac (Cabdulaahi-soomaali)
This entry was posted in Amisom, Ashahaado la dirir!, Baarlamaanka, Banaadir Post, Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, Golaha Wasiirada, Hailemariam Desalegn, Hassan Sheekh Mahamud, Ictisaam, Igad, Isbaaro-Jidgooyo, Islihi-Nairobi, Jabuuti-Ina Cumar Geele, Kenya-Somalia, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, Moqdisho, Musaveni, Qabyo Qoraal, QURBAJOOG-DANYUUSBARO, Qurbajoogta Somalida, Somali Media, Somalia, Turkiga=NATO, Ugandha, Umul, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida!!, Xerada Qaxootiga Badbaado and tagged Alshabaab, Amisom, Banaadir Post, Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, CRD SOMALIA, DAMMU JADIID, Kenya, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, News From Somalia, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya. Bookmark the permalink.
SOMALIA & ETHIOPIA:- Ethiopian rebels want Canadian oil firm to withdraw from War Zone